Izincomo ezithembekile zokonga ugesi kanye nemikhiqizo yokuvikela imvelo
Isikhathi Iposi: Sep-01-2020
Isici se-Multi element high efficiency siyimishini yokuhlola eyenziwe ngabantu futhi ehlakaniphile edizayinwe yinkampani yethu ngokusho kwesidingo semakethe nokwenza komkhiqizo. Ukusebenza nezici ze-multi element ukusebenza kahle okuphezulu sc ...Funda kabanzi »
Amakhono okukhethwa kwesikrini esiqondile sokudlidliza
Isikhathi Iposi: Aug-31-2020
1. ngokusho kokukhethwa kwesayithi Ubude nobubanzi besiza kufanele bucatshangelwe uhlobo oluqondile lokuhlolwa kokudlidliza; kwesinye isikhathi ububanzi bokukhishwa kwesikrini sokudlidliza komugqa kunqunyelwe, nokuphakama kwesiza i ...Funda kabanzi »
Vibration motor manzi
Inqubo yonke yokuhlola imoto edlidlizelayo ukuhlola nokubala izinto zokwakha. Izinto zokucaciswa okuhlukile zihlukaniswe ngezinto eziphezulu nezingezansi. Ukusebenza kokuhlolwa kufanele kube phezulu, i-pr ...Funda kabanzi »
Umehluko phakathi kwemoto yokudlidliza nemoto ejwayelekile
Isikhathi Iposi: Aug-24-2020
Imoto yokudlidliza: Imoto yokudlidliza ifakwe isethi yamabhulokhi e-eccentric eguquguqukayo emaphethelweni womabili we-shaft shaft, futhi amandla okuthakazelisa atholakala ngamandla we-centrifugal akhiqizwa ukujikeleza kwejubane elikhulu le-shaft nebhulokhi eccentric. Ibanga lokuvama kokudlidliza kwe ...Funda kabanzi »